Forex Slippage | Inona no atao hoe fialofana sy fanatsarana ny vidiny? FXCC
Fanatsarana ny vidiny
Nanazava ny fampindramana Forex
Ny fandaniana, amin'ny lafiny ara-barotra, dia mety ho faritana tsara amin'ny fananana baiko feno amin'ny vidiny isan-karazany amin'ny vidiny voalohany navoaka tao amin'ny sehatra varotra. Na izany aza, ny fialonana dia tokony ho raisina ho toy ny filazana tsara fa ny tsena sy ny fidiran'ny mpivarotra eo amin'ny varotra dia miasa amin'ny fomba mangarahara sy mahomby.
Ny mpivarotra dia afaka mahatsapa ny baikony feno lalana telo; Amin'ny vidiny miresaka, dia mahatsapa fialantsasatra ratsy - izay mameno ny volany amin'ny vidiny tsy mahasoa azy ireo, na miaina fialantsiny azo antoka - rehefa feno ny vidiny amin'ny vidiny tsaratsara kokoa noho ny vidin'entana voalazan'io. Ny tena zava-misy dia tokony ho raisina ho toy ny fanamafisana ny fampiroboroboana ny mpivarotra amin'ny tsena tena mahomby, madio ary mangarahara. Amin'ny ankapobeny amin'ny fanajana ny ECN amin'ny alàlan'ny fanodinana, dia tena tsy dia mahazatra loatra ary tena mampiahiahy mihitsy, raha toa ka fenoina ny vidin'ny vidin'ny vidin'ny vidiny marina ny baikon'ny mpivarotra.
Ao amin'ny tsenambarotra toy ny FX, mitodika manodidina ny $ 5 trillion isaky ny andro alakamisy ary manatanteraka asa an-jatony an-jatony isan'andro, dia fisehoan-javatra voajanahary sy fanantenana antenaina fa tsy mety ho mifanaraka tsara amin'ny tontolo iainana ny didy rehetra. Ao anatin'ny tontolo ara-barotra ara-barotra ara-drariny sy mangarahara ECN dia manome ny sombin-dahatsoratra FX ny dobo amin'ny mpamatsy entana liquidity, afaka miova tampoka sy mivaingana ny tsy fahampiana. Noho izany, mifanaraka amin'ny vidiny tsara indrindra ny lamandy, amin'ny fotoana mety amin'ny vidiny, na mety amin'ny vidiny tsara kokoa noho ny efa nandrasana.
Inona no fialofana tsara?
Ny fanimbana tsara ihany koa dia fantatra amin'ny hoe fanatsarana ny vidin'ny vidiny ary fisehoan-javatra iray izay ahafahana mandondona ny vidin'ny mpividy.
Ohatra, mpandraharaha iray mametraka lamandy mba hividy 1 lot EUR / USD amin'ny vidin'ny tsena amin'ny 1.35050, navoaka tamin'ny alàlan'ny MetaTrader ny nomerao ho an'ny mpividy liquidity ary avy eo dia naverina ny fampahafantarana ny mpivarotra fa ny baiko novonoina tamin'ny 1.35045. Amin'ny alalan'ny modely an'ny ECN / STP no nahatsapan'ny mpihira ny fialana saro-bidy, dia nofenoina ny vidiny tsaratsara kokoa, ny vidiny kokoa noho ny baiko voalohany.